IsiXhosa - Simpsons Attorneys
Senza uthetha thethwano lwamahala ukuqonda ukuba likhona ibango elibambekayo. Oku kukuqinisekisa ukuba ukhuselekile akukho ndleko ezinganyanzelekanga.
Awubhatali ndleko xa ungaphumelelanga apho kufanelekileyo – Injongo yethu kukuba sikukhokelele ngokusemthethweni. Ukuba asiyifezekisanga lonjongo akhonto uyihlawulayo.
Sinomlando hayi nje ngokugqwesa , kodwa uqinisekisa ukuba umxhasi wethu ufumana imbuyekezo eyiyo. Siphethe amatyala amaninzi ngempumelelo kwaye siyazi ukuba kubakhona ubunzima ukusebenzisana neRAF. Ukufumana igqwetha elisebenza ngengozi ngumahluko phakathi kwembuyekezo kumonakalo ukufumana kancinci okanye ungafumani kwanto. Ingozi yemoto okanye isithuthuthu lishwangushe elingenzeka noba kukanye ebomini bomntu lonto ingakhokela kumonakalo nokwenzakala kakhulu ukukhubazeka okanye ukufa.
WENZA NJANI XA KUKHO INGOZI?
Bhala umhla , ixesha kunye nendawo eyenzeke kuyo ingozi
Amagama nenkcukacha zomqhubi moto okholelwa ukuba nguye umenzi wengozi
Bhala amagama nenkcukacha zamangqina abonileyo
Dibana nogqirha okanye isebhedlele uzokufumana uvavanyo olululo
Qhagamsehlana negqwetha lengozi. Ukukhawuleza udibana negqwetha kubeka ibango lakho kwizinga elingcono
IRAF yingxowa mali esekelwe phantsi kweRAF. Ixhaswe yimali yerhafu edibanisa nexabiso lwamafutha emoto eMzantsi Afrika. Oku kwaziwa njengoviko lwamafutha emoto. Wonke umntu othenga amafutha emoto ubhatala uchatha eleke mlinganiselo wamafutha. Olu viko luya kwaRAF.
Zonke izithuthi ngokuzenzekelayo zikhuselwe yiRAF. Kodwa uxanduva likaRAF lujongana nokwenzakala ngokomzimba kubaqhubi moto nakubakhweli ,kwezinye imeko nabahambi ngenyawo. Kunjalo nje akabinaxanduva ngomonakalo wemoto nezinye izithuthi.
NGUBANI ONGAFAKA IBANGO KWARAF?
Abaxhomekeke kumfi ebaphangelela
UNGALUFAKA NINI IBANGO KWARAF
Ungalufaka kwiminyaka emithathu ukususela kumhla eyenzeke ngayo ingozi.
Ingozi le wonzakele kuyo ayinguwe unobangela
Wenzakele ngenxa yolongquzulwano
Ukwaleka kwibango likRAF intlungu nokungcungcutheka , uxinizeleko emphefumlweni , ukulahlekelwa yingeniso nendleko zonyango zikwancedisa kwibango labenzi bobubi okanye inkampani yomsholensi kukugcungcutheka ukulahlekelwa yingeniso ngenxa yomonakalo wemoto yakho.
Sitsalele ngomxeba ukuze udibane negqwetha lengozi mahala lakwaSimpsons.
Imiphumela enzima kwizigulana namasapho azo, unyango olungenankathalo lindawonye kumthetho wabenzakaleyo iya ngokubaluleka kakhulu eMzantsi Afrika. Ulandulwa kwenqanaba lwezempilo eMzantsi Afrika luya lusanda kakhulu.
Wonke umsebenzi wezempilo ( ingaba ngugqirha okanye isibhedlele) unoxanduva lokukhathalela izigulana zazo. Oku kugadwe kujongwe yiBhodi yogqirha boMzantsi Afrika. Unyango lwengozi lungaba luxanduva , kwaye ungafumana imbuyekezo phantsi koMthetho.
Njengesigulana unelungelo lokukhatthalelwa ngokufanelekileyo kwaye waziswe – ukuba ezomfanelo azenzeki iGqwetha lakwaSimpsons lingakunceda ngebango lakho. Sinobudlelwane kunye nengcaphephe kwezonyango ukuncedisana nathi sixovula imeko yakho.
YINTONI UNYANGO OLUNGENANKATHALO?
Unyango olungenankathalo luzindindi ezimbini zobango , umzekelo:
Mbuyekezo ngemali, kunye
Nembuyekezo engadibananga nemali
Mbuyekezo ngemali ziquka kunye nenkcitha mali ezithe zabakhona ngenxa yongabikho ngqalelo kwezonyango ezibangele ilahleko yengeniso.
Mbuyekezo engadibenamga nemali ingaquka ukulahlekelwa lilungu lomzimba okanye ukungakwazi ukuqhubekeka ngobomi ngehlobo olullulo ngenxa yengozi. Imbuyekezo kwezi imeko iyakubonelelwa yiNkundla ngokusekelwe kuphando oluphatheleneyo nelahleko kunye nomonakalo.
UNGALUFAKA NINI UBANGO LONYANGO OLUNGENANKATHALO?
Imeko nganye yezonyango olungenankathalo zizodwa kwaye ibago liyazimela ngokwenani lemiba ebalulekileyo efana nale:
Inkcazelo yezonyango olungenankathalo ngokwezoMthetho.
Nokuba ngaba umsebenzikwinxalenye zonyango wenziwe kakuhle
Nokuba kubekho inkqubo ephantsi – esezantsi ngenkathalo esiyifumeneyo isigulana , apho isigulana sihlukumezekileyo nelahleko ngenxa yayo
Nokuba ngaba uncedo kwezonyango lunikezwe ngokomgca okufaneleke lunikezwa ngalo eMzantsi Afrika
Kubalulekile ke ngoko ukuba ufumane umntu owaziyo umthetho akucebise ngokufaka ibango lonyango olungenankathalo.
NDINGAZIHLAWULA NJANI INDLEKO ZONYANGO OLUNGENANKATHALO?
Ukuba unebango elibambekayo isithembiso sethu kwaSimpsons sokuba awubhatali kwanto xa singaphumelelanga siba njalo ke.